भारतलाई अहिलेसम्मकै ठुलो झट्का, बन्यो कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित तेस्रो मुलुक — sancharkendra.com
१नेपालमा कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य ३६० रुपैयाँ
२ओलीले बिचौलियालाई यति ठुलो पद दिलाएपछि नेकपाभित्र हंगामा, कसले के भने ?
३नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७३ पुग्यो, आज मात्रै थप ३ जनाको मृत्यु
४थप ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २२ हजार ५९२ पुग्यो
५भोलीदेखि यी जिल्लाहरुमा एकसाथ कर्फ्यु जारी गरिने
६यस्तो आयो गृहमन्त्री थापाको कोरोना रिपोर्ट
७गण्डकी प्रदेशमा थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित, हेर्नुहोस् कुन जिल्लामा कति ?
८कोरोना संकटमा ग्राहक ठग्ने यी १९ पसललाई सरकारले गर्यो १० लाख भन्दा बढी जरिवाना
९घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि वडासदस्य गुरुङको धम्की-‘तिम्रो फेमिली नै उडाइदिन्छु’ (अडियोसहित)
१०कोरोनामुक्त भएका ९० प्रतिशतमा फोक्सोको समस्या, उहान सर्वेक्षणले देखायो यस्तो डरलाग्दो नतिजा
११यस्तो छ बिना डाइटिङ तौल घटाउने घरेलु विधि
१२रुघाखोकी लागेर हैरान हुनुभएको छ ? यस्तो खानाले चट्टै पार्छ
१ओली सरकारबिरुद्ध केछ बिद्रोही नेकपाको आगामी योजना ? हेर्नुहोस विप्लवको ताजा अन्तर्वार्ता
२बुधबारदेखि लागु हुने गरि लकडाउन गर्ने निर्णय, तर यी क्षेत्रमा लाग्नेछैन प्रतिबन्ध
३आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गरि ओली सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
४नेपालमा फेरी बज्यो खतराको घन्टी
५समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालिन कर्फ्यू आदेश जारी, आजैबाट सुरु
६कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १ जनाको मृत्यु
७चौतर्फी आलोचला भएपछि अयोध्याबारे सरकारले निकाल्यो फेरी बिज्ञप्ति
८भारतीय टेलिभिजनको प्रसारण बन्द भएपछि ओली सरकारले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति
९ओली सरकारले दमन नरोकेपछि विप्लवले नेता कार्यकर्तालाई दिए यस्तो विशेष निर्देशन, बिज्ञप्तिसहित
१०ओलीलाई बिद्रोही नेकपाको चेतावनी- बालुवाटारबाट खटाइएका सुराकी फिर्ता नगरे परिणाम गम्भीर
११लकडाउन अन्त्य गरेको २४ घण्टापछि राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन यस्तो प्रतिक्रिया, देशैभर तरंग
१२नेकपा नेता ओमप्रकाश पुन र पूर्णिमा गिरफ्तार, प्रहरीले सूचना दिन मानेन
भारतलाई अहिलेसम्मकै ठुलो झट्का, बन्यो कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित तेस्रो मुलुक
काठमाडौं । भारत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण सबैभन्दा प्रभावित हुने मुलुकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ लाख ९७ हजार ४१३ पुगेको छ । यससँगै कोरोना संक्रमित संख्यामा भारतले रुसलाई पछि पारेको हो ।
जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीका अनुसार अहिलेसम्म रुसमा कोरोना भाइरसका ६ लाख ८० हजार २८८ संक्रमित फेला परेका छन् । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २४ हजार २४८ नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् ।
त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि १९ हजार ६९३ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना भाइरसबाट ४२५ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतको सबैभन्दा प्रभावित राज्य महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म दुई लाख ६ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्दा आठ हजार ८२२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
तामिलनाडुमा अहिलेसम्म एक लाख ११ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्दा एक हजार ५१० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै दिल्लीमा पनि ९९ हजारभन्दा संक्रमित फेला परेका छन् भने तीन हजार ६७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । उत्तर प्रदेशमा अहिलेसम्म २७ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्दा ७८५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पश्चिम बंगालमा पनि २२ हजारभन्दा धेरै संक्रमित फेला पर्दा ७५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बिहारमा पनि ११ हजारभन्दा धेरै संक्रमित भेटिँदा ९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका चार लाख २४ हजार ४३३ संक्रमित निको वा डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
दिल्लीमा खुल्यो ‘विश्वकै ठूलो’ कोरोना संक्रमितका लागि स्याहार गृह
भारतको राजधानी दिल्लीमा १० हजार शय्या रहेको कोरोनाभाइरस स्याहार गृह उद्घाटन गरिएको छ । उक्त स्याहार गृहमा सामान्य लक्षण भएका तथा कोभिड-१९ पोजेटिभ भए पनि कुनै लक्षण नदेखिएकाहरूको उपचार गरिने बताइएको छ ।
२० वटा फुटबल मैदानजत्रो आकारको उक्त स्याहार गृहलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कोरोनाभाइरस केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । दिल्ली भारतको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो ।
भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १९ हजार ७०० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४२१ जनाको मृत्यु भएको छ २३ हजार ९३२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या ६ लाख ९७ हजार ८३६ पुगेको छ ।
एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भारतमा संक्रमितमध्ये ४ लाख २४ हजार ८९१२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित हुने मुलुकको सूचीमा भारत तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका छ भने त्यसपछि ब्राजिल प्रभावित मुलुकको रुपमा रहेको छ ।
यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन ३५ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । सोमबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म ५ लाख ३६ हजार ७१९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ५६८ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै १ करोड १५ लाख ५५ हजार २८० जना संक्रमित भएका छन् । त्यसमध्ये १ लाख ७५ हजार ४९९ जना पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका संक्रमित हुन् । संक्रमण देखिएको ६ महिनाभन्दा बढी हुँदा निको हुनेको संख्या पनि क्रमिकरूपमा बढ्दै गएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म ६५ लाख ३१ हजारभन्दा बढी उपचारपछि निको भएका छन् । कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा १ लाख ९३ हजार ६९७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
२४ लाख ७७ हजार ५७२ जना संक्रमित भएकोमा १४ लाख ३० हजार ६२० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा १ लाख ७५ हजार ३५५ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ३४ लाख ८७ हजार ६१९ पुगेको छ । त्यसमध्ये १५ लाख ६४ हजार ४५४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा ६२ हजार १६३ जनाको मृत्यु भएको छ । २५ लाख ७९ हजार ४५२ जना संक्रमित भएकोमा १७ लाख ३८ हजार ४६९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा ९३ हजार ६८५ जनाको मृत्यु भएको छ । २५ लाख १४ हजार १३४ जना संक्रमित भएकोमा १५ लाख ५५ हजार ४८२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा ११ हजार ४०० जनाको ज्यान गएको छ भने ४ लाख ७९ हजार ८४५ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये २ लाख ३० हजार १६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरुमा १२६ जनाको मृत्यु भएको छ । १० हजार ९४ जना संक्रमित भएकोमा ८ हजार ९९६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
उता स्पेनमा फेरि कोरोना भाइरसको महामारी देखिने संकेतपछि विभिन्न ठाउँमा पुनः लकडाउन सुरू गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी लगभग नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्पेनमा फेरि महामारीको अर्को लहर सुरु हुने संकेत देखिएपछि उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र गालिसियाका विभिन्न ठाउँमा पुनः लकडाउन गरिएको छ ।
७० हजार मानिसको बसोबास रहेको उक्त क्षेत्रमा आइतबार मध्य रातिदेखि शुक्रबारसम्म लागु हुने गरी गालिसियाको तटीय जिल्ला मासिनामा कामका लागि जाने वा आउनेलाई मात्रै प्रवेश र बाहिरिने अनुमति दिइएको छ ।
यसअघि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र क्याटालोनियामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएपछि लकडाउन गरिएको थियो । गालिसिया क्षेत्रमा फेरि २५८ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएपछि महामारी फैलन नदिन सरकारी अधिकारी फेरि लकडाउनको निर्णयमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ ।
वर्ल्डोमिटर्सका अनुसार स्पेनमा सोमबारसम्म २ लाख ९७ हजार ६२५ जना संक्रमित भएकामा ६१७ जनाको उपचार भइरहेको छ । संक्रमितमध्ये २८ हजार ३८५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानामा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार र समाचार सामाग्रीहरुको केन्द्र’ बन्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ ।
थप ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २२ हजार ५९२ पुग्यो
यस्तो आयो गृहमन्त्री थापाको कोरोना रिपोर्ट
गण्डकी प्रदेशमा थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित, हेर्नुहोस् कुन जिल्लामा कति ?
घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि वडासदस्य गुरुङको धम्की-‘तिम्रो फेमिली नै उडाइदिन्छु’ (अडियोसहित)
कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि ओली सरकारले बल्ल चाल्यो यस्तो कडा कदम, हेर्नुस बिस्तृतमा
काठमाडौँमा यी १३६ स्थानमा फैलियो कोरोना, हेर्नुहोस ठाउँको नाम र संख्यासहित
दुबईबाट १८४ यात्रु लिएर आएको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना, १७ जनाको मृत्यु
उपत्यकामा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि काठमाडौं प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई बल्ल लेख्यो यस्तो पत्र, के छ तयारी ?
यस्तो आयो प्रधानमन्त्री ओलीसहित अन्य ६ जनाको कोरोना रिपोर्ट
काठमाडौँ उपत्यका बज्यो खतराको घन्टी, एकैदिन १०६ जनामा कोरोना संक्रमण
वीपी सङ्कीर्ण, पुष्पलाल परिपक्व र उदात्त
मोदीले क्रान्तिकारी कवि वरवर रावलाई जेलमै मार्दैछन
इमान्दार मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित सञ्चारकेन्द्र नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु मध्ये एक हो । परिवर्तनका पक्षमा निर्भिकताका साथ उभिने यो जनपक्षीय अनलाइन मिडिया २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालानमा छ ।